Xalinta colaadda Beladweyne oo meel wanaagsan mareyso – Radio Muqdisho
Guddigii loo xilsaaray xalinta dagaal beeleedyadii ka dhacay Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in meel wanaagsan ay u marayaan howlahooda ku aadan dhameystirka heshiiska labadaasi beelood.
Midka mid ah guddiga xalinta colaadda gobolka Hiiraan oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay inay iminka meel fiican u mareyso sidii dib u heshiisiin dhab ah loo dhex dhigi lahaa maleeshiyo beeleedyadii ku dagaallamay Beladweyne.
“Maalmihii la soo dhaafay waxaa noo qabsoontay in aan ku guuleysano joojinta xabadda, in ciidamada la kala qaado oo la dejiyay meelihii ay markii hore deganaayeen iyo maxaabiis lakala haystay dib la isugu celiyay oo aan kala wareejinayay, runtii arrintu hadda meel fiican ayay noo mareysaa” ayuu yiri xubin ka tirsan guddiga.
Guddiga xalinta colaadda beladweyne ayaa socod ku soo maray meelihii lagu dagaallamay, si ay ugu kuurgalaan xaaladda guud ee amni iyo waxyaabihii ka dhaqan galay xabad joojinta.
Qaar ka mid ah guddiga ayaa ku baaqay in dadkii ka barakacay guryahooda ay dib ugu soo laabtaan, madaama gudigu ay mas’uuliyad ka saarantahay in ay xal ka gaaraan waxa sababay gacan ka hadalka, iyagoo bulshada ka codsaday inay dhankooda gacan ka geystaan dadaallada dib-u-heshiisiineed ee iminka socda.